सर्वज्ञ वाग्ले, चन्चरिमा ...
अर्कोपटक देशको नेतृत्वनै गर्ने हो- रवीन्द्र मिश्र ...
एनआरएनए-आइसिसी क्षेत्रीय उपसंयोजकका उमेम्द्वार शिव कुमार राईसंगको छोटो कुराकानी । क्षेत्रीय उपसंयोजकका लागि तपाइका ऐजेण्डाहरु के–के छन् ? मेरो ऐजण्डाहरु मुख्य त २०–२० भिजन वियोण्डलाई कसरी अगाडि बढाउने र सफल बनाउने भन्नेमा छ । यसका...
आफू माथि लागेका आरोपमा पहिलो पटक बोले । किन साथै आँसु झारे धुर्मुस सुन्तलिले ? ...
झापा जिल्लाको चप्रमगरी गाउँमा पिता मेदिनी प्रसाद चुडाल र माता नर्वदा चुडालकी कान्छी छोरीका रुपमा जन्मिएकी शुशिला चुडाल गौतम सौन्दर्य ब्यवसायमा स्थापित नाम हो । हाल राजधानिको भाटभटेनीमा एस एण्ड एस भाटभटेनी हर्वल ब्युटीपार्लर...
धनुषा जिल्लाको गाउँमा जन्मेर प्रारम्भिक शिक्षा हुँदै, सपनाको ‘नेपाल सहर’ – काठमान्डौंबाट उच्च शिक्षा हासिल गरी करिब १४ वर्ष अगाडिदेखि सात समुन्द्र पारिको ‘सपनाको देश’ मा नेपाली समुदायका विभिन्न तह र तप्कामा सक्रिय अमेरिकी...
दाबा त गर्न नसकिएला तर नेपाली-अमेरिकनहरुमा सायद सबभन्दा कम उमेरमा यत्तिको व्यावसायिक सफलता पाएकामा पर्छन् होला रिजवुड, न्यूयोर्कका २३ वर्षीय रेष्टुरेण्ट व्यवसायी विकास खरेल। हालसालै मात्र न्यु योर्क स्थित १०९ वर्ष पुरानो डेमोक्रेटिक क्लबले...
अनुज थापा, न्यु योर्क । रंगमञ्चकी नयाँ पुस्ता हुन् ,रोजिता बुद्धाचार्य । इन दि रेड एण्ड ब्राउन, वाटर, थ्री पेन्नी ओपेरा, चारूमती देखि लिएर पछिल्लो रविन्ıनाथ टेगोरको कथा ‘मालिनी’ बाट आफूलाई रंगमञ्चमा स्थापित बनाएकी २४ वर्षे...
वरिष्ठ फिजिसियन डा. बुद्धिबहादुर थापा भन्छन्‘यो अवस्थामा आउने सिगाँन र खोकीबारे सजग हुन पर्छ, नेपालमा स्वाईन फ्लू र वर्ड फ्लुको बिरामी धेरैनै फेला परिसके’ । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने लगातार रूपमा सिगान...
Interview with Purna Baniya NRNA को आसन्न चुनावको बिषयलाई लिएर पूर्ण चन्द्र बानिया (महा सचिवका उमेदबार)सँग गरिएको कुराकानी ...